Warbixin : Saraakiil iyo Diblumaasiyiin lagu dilay Weerarro ka dhacay Dalka Afghanistan.
Wednesday January 11, 2017 - 12:25:40 in Wararka by Super Admin
Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan ayaa sheegatay mas'uuliyadda Seddax howl-gal oo Istish-haadi ah oo maalintii Talaadada ee shalay si kala duwan uga dhacay magaalooyinka Kaabuul iyo Qandahaar ee dalka Afghanistan.
Howl-galka koowaad waxaa lagu qaaday Xarunta Maamulka Gobolka Qandahaar ee Koonfurta dalkaasi, waxaana lagu soo beegay xilli halkaas ay kulamo ku lahaayeen Mas’uuliyiinta Maamulka Gobolka Qandahaar iyo Wefdi diblumaasiyiin ah oo uu horkacayay Safiirka Dowladda Imaaraatka Carabta u fadhiya dalkaasi.
Howl-galka waxaa lagu dilay ku dhawaad 40 qofood oo u badanaa Askar iyo Saraakiil ka tirsan Xukuumadda daba dhilifka ah ee Kaabuul, waxaana sidoo kale halkaas ku dhaawacmay tobonaan kale, iyadoona dadka dhintay ay ka mid yihiin Shan diblumaasi oo u dhashay Imaaraatka Carabta, waxaa sidoo kale dhaawacmay Gudoomiyaha Gobolka Qandahaar, Taliyaha guud ee Booliiska gobolkaasi iyo Safiirka Dowladda Imaaraatka Carabta u fadhiyaWadanka Afghanistan.
Wararku waxay sheegayaan in sidoo kale qaraxaasi ay ku dhinteen Mas’uuliyiin ay ka mid yihiin Gudoomiye ku xigeenkii Gobolka Qandahaar Cabdul-Cali Shamsi iyo Shan diblumaasiyiin kale oo u dhashay dalka Imaaraatka Carabta.
War rasmi ah oo kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda daba dhilifka ah ee Imaaraatka ayaa waxay ku xaqiijisay in weerarkii Qandahaar ka dhacay ay ku dhinteen Shan ka mid ah Diblumaasiyiinta Imaaraatka u dhashay ee ku sugnaa dalka Afghanistan.
Afhayeenka Wasaaradda arrimaha gudaha ee Xukuumadda Kaabuul Sadiiq Sadiiqii ayaa isna sheegay in 72 qofood ay ku dhaawacmeen qarixii shalay ka dhacay magaalada Qandahaar, isagoona tilmaamay in dhaawacyada la geeyay Isbitaalka dhexe ee magaalada, halka qaar ka mid ah dhaawacyadana loo daabulay magaalada Caasimadda ah.
Afhayeenka Xarakada islaamiga ah ee Daalibaan Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay howl-galkaas Istish-haadiga inuu aad uga badan yahay inta ay sheegeen Saraakiisha laamaha Ammaanka ee dalka Afghanistan, wuxuuna tibaaxay in howl-galkaasi lagu qaaday Guriga martida ee Gobolka Qandahaar lagu soo beegay xilli uu halkaas shir uga socday Mas’uuliyiinta Gobolka u qaabilsan Maamulka daba dhilifka ah iyo Mas’uuliyiin ka socotay Dowladda Imaaraatka Carabta.
Dhanka kalena inkabadan 70 ka tirsan Ciidamada Sirdoonka ee Xukuumadda daba dhilifka ah ayaa ku dhintay laba Camaliyadood oo istish-haadi ah oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada Kaabuul.
Mid ka mid ah Ciidamada Mujaahidiinta Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan, gaar ahaan Katiibada Istish-haadiyiinta ayaa abaare tobonkii galabnimo ee maalintii shalay waxaa isagoo xiran Suun ay ka buuxaan waxyaabaha Qarxa uu weerar ku qaaday Gaari ay saarnaayeen Saraakiil iyo Ciidamo ka tirsan Lamaha Sirdoonka.
Weerarka waxa uu ka dhacay Mandiqadda lagu magacaabo Daarul Ammaan ee magaalada Caasimadda ah ee Kaabuul, waxaana markii ay dhacday Camaliyadda koowaad goobta soo gaaray Ciidamo badan oo ka tirsan Booliiska, waxaana markale howl-gal Istish-haadi ah ku qaaday mid ka mid ah walaalaha Guutada Istish-haadiyiinta ee Imaarada oo kaxeynayay gaari weyn oo lagu soo raray walxaha Qarxa.
Afhayeenka Imaarada islaamiga ah ee Afghanistan Sheekh Dabiixullaahi Mujaahid ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu sheegay in Macluumaadka ay helayaan Mujaahidiinta ay sheegayaan in Camaliyadda koowaad ee lagu beegaday gaariga Baska ah ee ay la socdeen Ciidamada Sirdoonka inay ku dhinteen ku dhawaad 30 isugu jira Askar iyo Saraakiil, iyadoo howl-galka labaad ee gaariga loo adeegaday ay ku dhinteen wax ka badan 40 ka tirsan Ciidamada Booliiska ee Xukuumadda Kaabuul.
Qarax Gaari looga Gubay Ciidamada 'Puntland' Oo Ka Dhacay Deegaanka Sugurre.